I-UKZN yethule i-inthranethi entsha.
I-UKZN yethule i-inthranethi okulula ukuthi abasebenzi nabafundi bayisebenzise ukuthola izindaba ezisematheni neminye imininingwane – konke kwingosi eyodwa.
Lengosi, esungulwe uPhiko Lwezobudlelwano Besikhungo, ididiyele konke ndawonye kanti yenza ukuthi abasebenzi nabafundi bakwazi ukubheka imininingwane yabo ngokuthi bavele bangene kuyona.
Ikhasi umuntu afikela kulona lenziwe kabusha futhi linezinto eziningi ezintsha, lenzelwe abasebenzi nabafundi, lizoba nezindaba eziqondene nabo, ikhalenda yemicimbi nebhodi lemininingwane ye-COVID-19, izinto ezenzeka eNyuvesi, izinqubo nendlela yokungena masinyane ezinsizeni zokufundisa nezokufunda nezinombolo umuntu angazishayela ukuze asizakale.
Abasebenzi bakhonjwa engosini enezindaba ezithinta bona, bakwazi nokungena kwi-Independent Counselling and Advisory Services (i-ICAS) nezinye izinsiza eziqondene nesimo sempilo yabasebenzi, izinsuku ezimqoka kwikhalenda yesikhungo, usizo lokuxhasa abenza ucwaningo nezinye izimemezelo, amafomu akwezabasebenzi, imicimbi yabasebenzi esikhungweni namafayela abasanda kuwathumela.
Ingosi yabafundi iveza imininingwane eqondene ngqo nabafundi, yenze kube lula ukuthola izindaba, izinsiza ze-Student Central, ezoMkhandlu Wezabafundi nezokuphathwa kwabo, imininingwane ngomtapo wolwazi wase-UKZN nemicimbi yesikhungo neyabafundi.
Ephawula ngokwethulwa kwe-inthranethi entsha yase-UKZN, uNks Normah Zondo, Isikhulu Esibambile Sezobudlelwano Besikhungo uthe: ‘Emasontweni azayo sizogabisa ngezinye izinto ezikhona kulenkundla ukusiza abafundi nabasebenzi ukuthi bakwazi ukuyisebenzisa kalula.’
UZondo wengeze ngokuthi: ‘Sethembe nemibono yenu ukuze sizokwazi ukuninika inkundla okulula ukuyisebenzisa. Ngakho siyanxusa ukuthi ningene kulengosi, nifunde kabanzi ngayo nokuthi kutholakalani kuyona kanti sethemba ukuthi nizohlomula okukhulu kuyona.’